Ahaziri ntecha akpa, Factory, Manufacturers na Suppliers - Dongguan Yihua Akpa Co., Ltd.
.Lọ >Ngwaahịa >Akpa ịchọ mma
Ejiji ejiji, ọmarịcha ma sie ike, dị mfe iburu. Uwe ejiji dị elu nwere akwa dabara na uwe gị.
Portable ịchọ mma akpa, super eriri ihe elu oyi akwa, ọkọ-eguzogide ma na-eyi na-eguzogide, shei kpochapụwo udi, fashionable na ọhụrụ, obere size, nnukwu ikike.
Light aka anam-elu akpa, naịlọn ákwà, mgbochi ọkọ-eyi na-eguzogide, ọhụrụ ejiji, obere ikike, atọ na agba nhọrọ.
Gauze nke okpukpu abụọ, dị ka ifuru, obere nha, buru ibu na ike, foldable, ma dị mfe ịnakwere.